Forefront TMG (ISA Server)မှာWeb Caching လုပ်တာမထူးသလိုပဲ — MYSTERY ZILLION
Forefront TMG (ISA Server)မှာWeb Caching လုပ်တာမထူးသလိုပဲ
windows server 2008 မှာ Forefront TMG (ISA Server) ကိုအသုံးပြုပါတယ် . .အကုန်အဆင်ပြေပေမယ့် . .Web Caching လုပ်တာ ဘာမှ မထူးသလိုပါပဲ (router နဲ့သုံးသလိုုပဲ). .website ဖွင့်တာတွေလည်း ပိုမမြန်လာပါဘူး .. google page တောင်လေးပါတယ် . .လိုင်းလေးရင်ပိုဆိုးပါတယ် . .တချို့ပြောတာကြားဖူးတာကတော့ အင်တာနက်လိုင်းလုံး၀ကျသွားရင်တောင် google page ပေါ်တယ်ပြောတယ် . . .ကျွန်တော်လည်း သေချာမသိလို့ပါ . . caching ကို သတိထားမိတာတစ်ခုကတော့ တချို့ဆိုင်မှာ flash song တွေ ဖွင့်ကြည့်တော့ လိုင်းကျနေတာတောင်ပွင့်ပါတယ် .. အဲ့ဒီမှာဆိုင်မှာတော့ ISA 2006 ကိုသုံးထားပါတယ် . . .
ကျွန်တော် setting လုပ်တာပဲ မှားနေလို့လား . . Cache Settings ထဲက Cache Drives မှာလည်း D ကို 50000 MB တောင်ပေးထားသေးတယ် . . Cache Rules မှာလည်း လျှောက်ပြောင်းကြည့်သေးတယ် . . မထူးဘူးဖြစ်နေတယ် . . ဘာများလိုအပ်လို့လဲမသိဘူး .. နောက်ဆုံး ဘယ်လိုလုပ်လုပ် မထူးဘူးဖြစ်နေလို့ . .MZ ကသူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ အကူအညီတောင်းရတာပါ . . . နောက်ပြီး . .Cache Rules မှာလည်း ဘယ် setting က ဘာအကြိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုလည်း . ပြောပြပေးပါအုန်း:rolleyes:
ကျွန်တော်က လုပ်ဖို့ကြိုးစားတုန်းပါ။ MFTFG ကို လိုချင်ပါတယ်။ download ဆွဲတာလဲ အားလုံးပြီးတော့ part5မှာ crash ဖြစ်နေတယ် ဆိုလို့ ပြန်ဆွဲတော့လဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အစအဆုံး ပြန်ဆွဲတော့ လဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ရှိရင် share ပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
caching သဘောကိုက ချက်ချင်းထူးမယ်မထင်ပါဘူး။ အချိန်ကြာလေမြန်လေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ISA အကြောင်းမသိလို ့အသေးစိတ်တော့ မပြောနိုင်ပါ။